निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले ग्राहकहरुलाई विभिन्न स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले घरायसी प्रयोजनको लागी विभिन्न स्पिड अन्तर्गत 30 Mbps को स्पिडमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआइरहेको छ। यस 30 Mbps स्पिडको प्याकेज अन्तर्गत १ महिने अग्रिम, ३ महिने अग्रिम, ६ महिने अग्रिम अथवा १२ महिने अग्रिम अबधिको योजनाअनुसार इन्टरनेट जडान गर्न सकिनेछ।
वर्ल्डलिङ्कको 30 Mbps को फाइबर इन्टरनेट सेवा (घरायसी प्रयोजनको लागी) को मुल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी
30 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याकेज अन्तर्गत वर्ल्डलिङ्कको नेट टिभी पनि जडान गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यसको लागी छुट्टै शुल्क लाग्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ५५० /-, सिंगल ब्याण्ड राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ५०० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ४, ५५० /- पर्नेछ। सिंगल ब्याण्ड राउटरको सट्टामा ग्राहकले डबल ब्याण्ड राउटर पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ र यसको मूल्य रु. रु. ४, ००० /- पर्नेछ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ४, ५०० /-, सिंगल ब्याण्ड राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. २, ००० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ७, ००० /- पर्नेछ। सिंगल ब्याण्ड राउटरको सट्टामा ग्राहकले डबल ब्याण्ड राउटर पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ र यसको मूल्य रु. रु. ३, ५०० /- पर्नेछ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १५, ००० /-, सिंगल ब्याण्ड राउटर (रेण्टल ) शुल्क रु. १, ००० /- र फाइबर केवल रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. १६, ५०० /- पर्नेछ। सिंगल ब्याण्ड राउटरको सट्टामा ग्राहकले डबल ब्याण्ड राउटर पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ र यसको मूल्य रु. रु. २, ००० /- पर्नेछ।
ब्रोडलिङ्क वर्ल्डलिङ्क भायनेट क्लासिक टेक सुबिसु वेबसर्फर नेपाल टेलिकम एनसेल डीसहोम